June 10, 2019 June 10, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on यस्तो ठाँउ जहाँ युवतीलाई छानीछानी सित्तैमा सेक्स गर्न पाइन्छ
काठमाडौं । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका युवती बाध्यताले यौन व्यवसायमा लागेका हुन्छन् । अर्कोतिर छोटो समयमै धन कमाएर धनाढ्य बन्न व्यापारीले यौन व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् ।
यो पनि पढुनहोस अर्काकी पत्नीको भोगमा लालच राख्ने मानिस चाँडै नष्ट
यो पनि पढुनहोस कतारको स्टेडियममा १४ सय नेपालीको मृत्यु !
कतारको स्टेडियममा १४ सय नेपालीको मृत्यु
आफ्नै श्रीमानलाई जेल पठाएर ससुरासँग बुहारीको मस्ती
तपाइले कति पटक सेक्स गर्नुभयो ? अब फेसबुकले थाहा पाउँछ नि
September 11, 2019 अखवार अनलाइन